Social Media bụ Gold nke m maka Insurance Insurance | Martech Zone
At Social Media Ahịa Worldwa afọ a, nloghachi na ego bụ ihe jikọrọ ọtụtụ n'ime nnọkọ na mkparịta ụka na ogbako ahụ. LeadSift bụ ikpo okwu na-enyere aka na-elekọta mmadụ na-ere site na-ege ntị ma na-ebute ikike ndị nwere ike nye ụlọ ọrụ. N'ihe atụ a, LeadSift chịkọtara nghọta sitere na ihe karịrị 3.7 nde tweets na usoro nyocha nke nyocha iji gosipụta ikike nke ire ere na-elekọta mmadụ n'ime ụlọ ọrụ mkpuchi.
Otu n'ime ihe kachasị ike nke mgbasa ozi ọha na eze bụ usoro nke usoro na usoro nke emere site na nnukwu data. Ntinye aka ọ bụla, tweets ọ bụla na mmekọrịta ọ bụla na-ejikọta iji mepụta ihe anyị na-ezo aka dị ka nnukwu data. Site na nlezianya nyocha, LeadSift kpughere ọnọdụ ndị dị na data nke ụlọ ọrụ ịnshọransị nwere ike ịkwado iji dịkwuo irè ma rụọ ọrụ nke ọma n'ahịa ahịa na ahịa ha.
Tags: chukwunchegharịavivageicomkpuchi ahịandụmba nile-aga n'ihuelekọta mmadụ mediaugbo ugbosteetindụ anyanwụ ego
Tụkwasị Obi, Mgbasa Ọha na Nkwado
Imeziwanye Nzube Ahịa nke Ọma